ब्याटल राउण्डमा असफल बने शेरबहादुर देउवा, दोश्रो चरणमा कोइरालासँग भिडन्त ! – Mission Khabar
ब्याटल राउण्डमा असफल बने शेरबहादुर देउवा, दोश्रो चरणमा कोइरालासँग भिडन्त !
मिसन खबर २८ मंसिर २०७८, मंगलवार ०९:२५
काठमाडौं । ब्याटल राउण्डमा कांग्रेस सभापतिका पाँचै जना उम्मेदवार असफल भएसँगै दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच भिडन्त हुने भएको छ । कांग्रेस बिधान अनुसार पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको हो ।
पहिलो चरणमा देउवाले २२५८ मत प्राप्त गर्दा डा. शेखर कोइरालाले १७२९ मत प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेका प्रकाशमान सिंहले ३७१ मत प्राप्त गर्दा विमलेन्द्र निधिले २४९ मत ल्याएका छन् । कल्याण गुरुङले जम्मा २० मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार अब दोस्रो चरणमा बढी मत प्राप्त गर्ने देउवा र कोइरालाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
बाँकी उम्मेदवारले कसलाई समर्थन गर्छन्, यसले सभापतिमा को विजयी हुन्छ भन्ने आधार तय गर्नेछ । यसअघि नै विगतमा देउवा पक्षमा रहेका निधीले कोइराला क्याम्पमा खुल्ने संकेत गरेका छन् । सिंह समेत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल क्यम्पमा रहेकाले दोश्रो चरणमा निर्वाचन धकेलिदा कोइराला पक्ष बढी हौसिएको छ ।